Farmaajo oo khudbad aan caadi ahayn maanta kahor jeediyay xildhibaanada labada Aqal (DAAWO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Farmaajo oo khudbad aan caadi ahayn maanta kahor jeediyay xildhibaanada labada Aqal (DAAWO)
Ra’iisul wasaarihii hore ee dowladii KMG ahayd ahna musharax haatan u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta khudbad aan caadi ahayn kahor jeediyay xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Khudbada Farmaajo oo ahayd mid uu kaga hadlayay musharaxnimadiisa ayaa ka hadlay arrimo fara badan oo haatan ka taagan dalka, wuxuuna khudbadiisa xidhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka kaga codsaday inay u doortaan xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Musharax Farmaajo oo hore usoo noqday ra’iisul wasaare ayaa ballan-qaad aan caadi ahayn u sameeyay qofkii soo sheega qarax ama la shaqeeya hay’adaha amniga in la siin doono lacag dhan 100,000 doollar, hadii uu doonayana dibada loo diri doono, taasoo looga horgtagi doono qaraxyada ka dhaca dalka.
Sidoo kale, Mr. Farmaajo ayaa sheegay in shaqsigaasi la shaqeeya hay’adaha amniga uu ka mid noqon doono nabadoon odayaasha ka mid ah, islamarkaana odayaasha dhaqanka loo qori doono mushaar ay bil kasta qaataan, isagoona dhinaca kale tilmaamay in si joogto ah loo bixin doono mushaaraadka ciidamada qalabka sida oo dhan, oo aanay ku dhici doonin mushaar la’aan.
“Waxaan rabaa in aan idin xasuusiyo balantii hadda kahor aan hortiina ka qaaday markii la i ansixinaayay, 6 bilood ayaan balantaasi ku sameeyay amniga waa ogtihiin wadada Makka Al-mukarama lama mari karin, amniga ayaan aad u sugnay, $7 million baan uga tagay khasnada dowladda oo aanan waxba ugu imaan, waxaan dib u hirgeliyay teleefishinka dowladda oo haatan si xowli ah u shaqeeynaya” Sidaas waxaa yiri musharax Farmaajo.
Ugu dambeyntii, musharax Farmaajo ayaa sheegay in xukuumadii uu madaxda ka ahaa ay cafis u fidisay dhalinyaradii Al-shabaab lumisay, isagoona ugu baaqay dhalinyaradda kale inay nabada qaataan.
“Illaa 300 oo kasoo goostay Al-shabaab ayaa waxaa ku haynay xero, waxaana midkiiba siin jirnay 100$, dowladii naga danbeeyay way wadi waayeen qorshahaas, haddana Ingiriis ayaa la wareegay” Ayuu Musharax Farmaajo hadalkiisa kusoo gaba-gabeeyay.